पत्याउनुहुन्छ ? काठमाण्डौँमा श्रीमानको मृत्यु भएको १० घण्टामै श्रीमतीको मृत्यु - Deshko News Deshko News पत्याउनुहुन्छ ? काठमाण्डौँमा श्रीमानको मृत्यु भएको १० घण्टामै श्रीमतीको मृत्यु - Deshko News
पत्याउनुहुन्छ ? काठमाण्डौँमा श्रीमानको मृत्यु भएको १० घण्टामै श्रीमतीको मृत्यु
काठमाडौँ, पुस २६
कालगतिले श्रीमान् श्रीमतीको एकै दिन मृत्यु भयो भने, के भन्नु हुन्छ ? यो कुरा सायदै कसैले पत्याउँनु हुन्न । तर काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर निवासी शर्मा परिवारमा पुस २४ गते मंगलबार १० घण्टाको फरकमा दुःखद घटना भएको छ । यस परिवारमा छोराहरुले बुबाको दाहसंस्कार नसक्दै आमाको बियोग भोग्नु परेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
सोमबार बेलुका खाना खाएर सुतेका परिवारमा राति एक्कासी बुबा रामगोविन्दलाई छातीमा असह्य पीडा भएपछि अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालमा पु¥याएर जाँच गर्दैमा डाक्टरले उनलाई मृत घोषण गरेका थिए । चिकित्सकले अस्पतालमा लैजादै गर्दा बाटोमा नै उनको मृत्यु भएको बताएका थिए ।
श्रीमानको मृत्यु भएपछि शोकमा डुबेकी रामगोविन्दकी ७१ वर्षीय श्रीमती सबै प्रकृया पूरा गरेर कोरामा बस्न लागेकी थिइन् । सोही अवस्थामा उनmलाई सास फेर्न गाह्रो भयो । सबै परिवार एकै ठाउँमा भए पनि उनको हेरचाह गर्दै गर्दा उनको मृत्यु भएको हो ।
दशैँमा भात खान चामलकाे जोहो गर्दै ओलानी गाउँका विपन्न परिवार
धनगढी, असोज २५ छिमेकी धान भित्र्याउन व्यस्त हुँदा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१२ की लक्ष्मी विक चामलको
चीनसँग कुनै हालतमा झुक्दैनौंः ताइवानी राष्ट्रपति
एजेन्सी, असोज २५ ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इंग वेनले चीनसँग कुनै हालतमा नझुक्ने र आफ्नै मौलिक
प्रदेश १ मा विश्वासको मत छलेर धमाधम राजनीतिक नियुक्ति
विराटनगर, असोज २५ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत छलेर धमाधम राजनीतिक नियुक्ति
अछाममा जन्ती गएर फर्किएको जीप दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु (विस्तृत विवरणसहित)
अछाम, असोज २५ जन्ती गएर फर्किएको बोलेरो जीप अछाममा दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको
आज पहाडी भूभागमा वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं, असोज २५ आज सोमबार मुलुकका पहाडी भूभागमा वर्षाको सम्भावना छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका
सम्पादक : अंकुश कुँवर